Hiriira Oromiyaa: Magaalota Oromiyaa keessatti hiriirri mormii itti fufeera - BBC News Afaan Oromoo
Hoogganaan OMN Jawaar Mahammad eegdoti isaa akka kaafaman ajajamuusaaniitiin walqabatee rakkoo mudateen hiriirri mormii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti geggeeffamaa jira.
Guyyaa har'aa magaalota Oromiyaa kanneen akka Finfinnee, Amboo, Shaashamannee, Adaamaa, Harar fi kanneen biroo keessatti Jawaar Mahammad doorsisuun haa dhaabbatu jechuun uummanni kumaatamaan ba'ee mormii dhageessiseera.
Hiriira kanarratti namoonni rasaasaan rukutamaniiru, sochiin daldalaa fi barnootaa dhaabbateera.
Daandiiwwan magaalota kanneen keessa darban cufamaniiru.
Jiraattonni magaalaa Amboo fi naannawa ishee rakkoo Jawaar Mahammad mudate mormuun ganamarraa eegalanii hiriirra turan.
Hiriira magaalaa Ambootti gaggeeffame kanarratti namoonni shan rasaasaan rukutamuu jiraattonni magaalattii BBCtti himaniiru.
''Maasaanuu daangaa qabdi'' Jawaar
Jiraattonni magaalaa Amboo halkan edaa doorsisa Jawaar Mahammad irratti aggaamame erga dhagahanii booda hiriira mormii ggaggeessuu eegalan.
Qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota hiriira ba'an bittimsuuf jecha gaazii nama imimmaanessuu erga itti gadi dhiisee booda hiriirtonnimmoo dhagaa darbachuu eegalan jedhu jiraattonni magaalattii BBCn dubbise.
Walitti bu'iinsi kan uumame poolisii Oromiyaa waliin akka ta'e namoonni ijaan argan dubbataniiru.
Walitti bu'iinsa uumameen konkolaataan poolisii tokko guutummaa guutuutti abiddaan gubatee daaraa ta'uu dubbataniiru kanneen ijaan argan.
Yeroo ammaa sochiin magaalattii guutummaatti dhaabbachuu fi daandiin magaalattii keessa darbu cufamuus dubbataniiru.
Hiriira kanarratti namoonni rasaasaan rukutaman Hospitaala Walii Galaa Ambootti wal'aanamaa jiru.
Hoji gaggeessaan Hospitaala Walii Galaa Amboo Obbo Dabbabee Faxxanaa dargaggoonni umuriinsaanii waggaa 17-28 gidduu ta'u sadi hospitaalasaaniitti yaalamaa jiraachuu BBCtti himaniiru.
''Dargaggoota saditu rukutamanii hospitaala keenya dhufan. Sadeen isaanii rasaasaan rukutamaanii dhufan.
Kan garaarra rukutame tokko amma wal'aansa baqaqsanii yaaluu gooneefii jirra. Kan luka gidduu naannoo qama walhormaataa rukutamellee amma wal'aansa baqaqsanii yaaluu argachaa jira.
Kan harkarraa naannoo gateettii rukutames wal'aansa salphaa argachaa jira. Hanga nuuf dand'ametti lubbuusaanii baraaruuf tattaafachaa jirra.''
Haaluma walfakkaatuun magaalaa Adaamaa keessattis hiriirri mormii kun gaggeeffameera.
Magaalattii keessatti waldhabdee hiriira irratti uumameen daandiin hundi cufamee tajaajilli hundi dhaabbateera.
Raayyaan waraanaa fi poolisin Oromiyaa magaala keessa socho'uun dargaggoota garee lamatti qoodamuun hiriira gara hokkoraatti jijjiiran irratti tarkaanfii fudhachaa jira.
Adaamaa keessa amma dargaggoota ulee baatanii asii fi achi figanii fi humna waraanaatii dhukaasa gurguddaa walirraa hin cinnetu deemaa jira.
Saamichi suuqilee fi tarkaanfiin sabummaan walqoodes mul'achaa jira.
Hiriira har'aa irratti lubbuun namaa darbuu kan gaafanne Hooggantuun kominikeeshinii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Aadde Raawudaa Huseen odeeffannoo akka qaban himu.
''Namni akka du'e nutillee dhageenyee jirra. Haa ta'uuti, qaama kamin raawwate kan jedhu ammaaf wanti adda bahe hin jiru,'' jechuun daandiin cuccufamun odeeffannoo argachuuf akka rakkise himan.
Gama kaaniin, akka qondaalli kuni jedhanitti ''qaamni biraa gamtaadhaan bifa ijaarameen yaaliin kan raawwatame jira,'' jechuun gareen dargaggoo karaa bahan karaarraa maqsuuf yaalame jira jechuun himatu.
Gama kaaniin, jiraataan magaalaa Awadaay tokko dargaggoo kaan waliin mormiif gara magaalaa Harar osoo imalanii Hammaressaatti akka ajjeefame kantibaan magaalaa Awadaay Obbo Jaafar Mohaammad himaniiru.
Ajjeechaan kuni walitti bu'iinsa Raayyaa Ittisa Biyyaa waliin dhalaten akka mudate gabaasni isaan dhaqqabu kan himan.
Hiriirri mormii kun magaalaa Shaashamanneettis geggeeffameera.
Jiraataan magaalattii tokko akka nutti himanitti qeerroo, qarree, jaarsaa fi jaartiin kumaatamaan ba'uun mormii dhageessisaa turaniiru.
''Doorsisii fi hacuuccaan Jawaar Mahammad fi hooggantoota keenyarraa dhaabbachu qaba. Magaalaa Finfinnee keessatti uummanni Oromoo kabajamuu qaba kanneen jedhan dhaadannoowwan dhageessifamaa turaniidha'' jedha.
Halkan naannoo sa'atii 10:30tti hiriira kan jalqaban ta'uu kan eere jiraataan kun,''Ijoon mormii keenyaa inni guddaan eegdota siif jijjiirra jechuun Jawaar Mahammad irraan doorsisa ga'an irratti xiyyeeffata,'' jedheera.
Hiriirri mormii kun nagana geggeeffamaa turuusaa kan dubbatu namni kun doorsisi darbee darbee tureera jedha.
Qaamoleen tikaa mootummaa utuma uummata hiriiraaf ba'e doorsisanii Qeerroo muraasa qabanii hidhuuf yaalanillee hin milkoofne jedheera.
Mormii ganamarraa eegaleen daandiin gara magaalattii seenu kallattii arfaniin cufameera jedha jiraataan kun.
Sochiin daldalaa fi geejjibaa tokkollee akka hin jirree fi akkasumas manni barnootaallee cufaa akka ta'e dubbateera.
Uummanni kan ganama subii ba'e hanga ammaatti daandiirra jira kan jedhu jiraataan kun ''hanga deebii quubsaa argannutti mormii keenya itti fufna'' jedheera.
''Aggaammiin sabboontota keenyarratti raawwataa jiru haa dhaabbatu. Jawaar ija keenya, ija keenya nu tuqnaan of duuba hin deebinu. Waajjira ODP fuuldurallee deemnee mormii keenya dhageessisaa turre. Qaamni mootummaa as ba'ee nutti dubbates hin jiru. Kanaafuu hanga gaaffiin keenya nuuf deebi'utti mormii keenya ittuma fufna,'' jedha jiraataan kun.
Jawaar Mahaammad: 'Kaayyoon 'Master Plan' jalqabaas quubsuma uummataa jijjiiranii naannicha alagoomsuudha'
Jawaar Mohaammad: Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa tarkaanfiin motummaanis ta'e poolisiin fudhatame hinjiru jedhe
Kantiibaa Ittaantuun Magaalaa Finfinnee hawaasa Musliimaa dhiifama gaafatan
‘Ibsi Paatriyaarkichaa ejjannoo Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa bakka hin bu’u’
Ergamaa Addaa Ameerikaatiif dhimma hidha Abbayyaarratti ibsi kennameef
Gaazexeessaan OBN magaalaa Dambidoollootti ajjeefame
Koloraadootti namtichi jaalallee isaa dabalatee namoota ja'a dhukaasaan ajjeese
Daa'ima ajaa'ibaa osoo hin gahiin haadha koomaa keessa turterraa dhalatte